Ny ranomasina dia manana loharano isan-karazany afaka miteraka angovo | Fanavaozana maintso
Nuria | | Herin'ny rivotra, Angovo mahery, Angovo azo havaozina, Teknolojia vaovao
Ao anatin'ireo karazana isan-karazany angovo azo havaozina, ireo manana ny ranomasina ho loharano voalohany no mahomby indrindra. Io fanambarana io dia avy amin'ny zava-misy satria tsy misy "aloka" any amin'ny ranomasina, ohatra, ny loharano toy ny rivotra ohatra dia azo hararaotina tanteraka. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia tsy misy sakana ary ny rivotra dia azo ampiasaina amin'ny tranga misy ny turbine herin'ny rivotra, izay miaraka amin'ny lelany goavambe dia manangona miadana kokoa ny rivotra ary mamadika azy io ho angovo amin'ny isanjato avo kokoa.
Tsy isalasalana fa ny rivotra avy any ivelany dia nanjary ny karazany miverimberina indrindra, efa tamin'ny faran'ny taona 2009 dia nanana herinaratra 2 63 XNUMX Mw izy ary na dia misy aza ny mpitarika ao amin'ny sehatra toa an'i Danemark sy ny Fanjakana Mitambatra, ny firenena toa an'i Shina dia manolo-tena hampitombo ny herin'izy ireo, ary hampivelatra ny fikarohana, ny fampandrosoana ary ny injeniera vaovao izay mamela ny fitrandrahana faran'izay betsaka ny Fambolena rivotra avy any ivelany amin'ny fampandrosoana turbinina rivotra izay afaka miasa mahomby avy amin'ny ranomasina.
Saingy ao amin'ny ranomasina dia loharano misy loharanom-pahalalana marobe, amin'io lafiny io ny angovo ateraky ny onja (fahefana motera onja) azo ovaina ho herinaratra ihany koa.
Na dia tsy dia mandroso aza izy io dia manana teknolojia fanandramana:
- Ireo firafitra miorina amin'ny morontsiraka na amin'ny fanambanin'ny ranomasina (taranaka voalohany).
- Ireo rafitra amoron-tsiraka misy singa mitsingevana na eo ambany amin'ny rano ambonin'ny tany (taranaka faharoa).
- Trano an-dranomasina, anaty rano lalina manana fetran'ny 100 metatra, miaraka amin'ireo mpanangona mitsingevana na milentika (taranaka fahatelo).
- Any amin'ny firenena Basque dia novolavolaina ny tetikasa miaraka amina teknolojia antsoina hoe Tsanganana mitafo rano izay ihetsehan'ny onja dia miteraka tsindry amin'ny habetsahan'ny rivotra voarakitra ao anaty tsanganana milentika anaty rano, miaraka amin'ny hery ampy ahafahan'io rivotra mikoriana sy mampiasa turbine io.
- Fitaovana hafa dia mpitroka na mpanintona, izay manararaotra ny fivezivezan'ny onja hamokatra angovo mekanika izay navadika ho herinaratra.
- Ny teknolojia hafa dia mifototra amin'ny rafitra sy terminator tafahoatra.
Izy io dia ny fanararaotana ny fiakarana sy ny fianjeran'ny ranomasina vokarin'ny onja. Ny fotokevitra dia ny fitoeran-drano iray dia fenoina amin'ny fisondrotan'ny ranomasina ary tsy misy rano amin'ny rano ambany, rehefa tafakatra amin'ny haavo iray ny haavon'ny rano eo anelanelan'ny ranomasina sy ny fitehirizan-drano, dia ampandalovina amin'ny turbine iray izay mamokatra angovo elektrika ny rano. Any France (La Rance) misy toerana toy izany.
Ny rafitra dia manana ny fatiantoka: ny haavon'ny onja dia tsy maintsy mihoatra ny 5 metatra, izay fetra satria ny toerana sasany dia tsy mifanaraka amin'ny toerana sasany. Ny fatiantoka faharoa dia ny azy fiantraikan'ny tontolo iainana avo satria ireo toe-javatra ireo dia mitranga amin'ny toerana manan-danja tontolo iainana an-dranomasina.
Famaritana hafanana ranomasina
Izy io dia ny fahasamihafana eo amin'ny maripana eo ambonin'ny ambonin'ny ranomasina sy ny rano lalina, izay tsy maintsy mihoatra ny 20º C (faritra ekoatera sy subtropika) ny fahasamihafana eo aminy.
Teknolojia izay vao manomboka any amin'ny firenena toa an'i India, Japon ary Hawaii.
Izy io dia manondro ny fampiasana ny fahasamihafana amin'ny tsindry eo amin'ny rano velona avy amin'ny renirano sy ny rano masira avy amin'ny ranomasina. Ny orinasam-pandraharahana norveziana Statkraft dia mamolavola tetikasa ao amin'ny Oslo fjord miaraka amin'ireto fitsipika ireto.
Miorina amin'ny fahasamihafana misy eo amin'ny sira misy ny rano amin'ny rano sy ny ranomasina. Rehefa mifangaro ireto rano ireto dia vokarina ny angovo azo ovaina ho herinaratra.
Manolotra herin-angovo betsaka ny ranomasina fa ny teknolojia hanararaotana azy ireo dia mbola ao anatin'ny dingana fanandramana, ankoatry ny rivotra avy any ivelany, izay efa mifaninana.
Ny tena sakana amin'ny herin-dranomasina no vidin'ny lafo amin'ny fitrandrahana azy, nampiadana ny fampandrosoana izany raha oharina amin'ny hafa angovo azo havaozina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Herin'ny rivotra » Manana loharano isan-karazany mahavita miteraka angovo ny ranomasina
XXD dia hoy izy:
Misaotra amin'ny vaovao
Mamaly an'i XXD
Fitsangatsanganana an-tsambo sy ny loto aterak'izy ireo
Môtô elektrika ho an'ny polisy